Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Canada Alphonso Davies Childhood Story Plus Ihe Ntinye Ucheld Biography Eziokwu
Ibido, akpọrọ ya “Onye isi nri D“. Anyị na-enye gị mkpuchi zuru oke nke Alphonso Davies Childhood akụkọ, Biography, Ezinụlọ, Ndị nne na nna, Ndụ mbido, ibi ndụ, ndụ onwe onye na ihe ndị ọzọ ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Ndụ na ịrị elu nke Davies Alphonso. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram na Ihe Mgbaru Ọsọ.
Ee, mụ na gị maara na ọ bụ otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ nwere onyinye kachasị pụta na MLS.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Fans anyị Alphonso Davies 'Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Alphonso Davies Childhoodmụaka Akụkọ:
A mụrụ Alphonso Boyle Davies na ụbọchị 2 nke November 2000 na nne ya, Victoria Davies, na nna, Debeah Davies, na ogige ndị gbara ọsọ ndụ Buduburam na Ghana.
Ọ bụ nwa mbụ na nwa nwoke n'ime ụmụ atọ amụrụ Victoria na Debeah.
Eeh, ị nụruru anyị!, A mụrụ Alphonso n’ogige ndị gbara ọsọ ndụ Ghanian, nke pụtara na ọ dị anya site na ịbụ onye mba Ghanian.
Gwa eziokwu!, mbụ ebido ya bụrụ onye mba ọzọ nwere ọbá akwụkwọ. na Ị maara?… Ndị nne na nna Alphonso Davies gbapụrụ na Liberia (mba ọdịda anyanwụ Africa) na 1999, mgbe agha obodo Liberia nke abụọ tiwapụrụ.
Ọ bụghị naanị ndị mụrụ ya, mana ọtụtụ ndị ezinụlọ Alphonso si Davies gara narị narị Miles gafere West Africa ruo mgbe ha mechara chọta ebe mgbaba n'ogige ndị gbara ọsọ ndụ Buduburam dị nso na Accra na Ghana ebe amụrụ ya.
Ọ bụ n'ogige ahụ ka nwatakịrị Alphonso nọrọ afọ anọ mbụ nke ndụ ya na-eto eto n'ala ala ọzọ na ezinụlọ ya.
Alphonso Davies nne na nna anaghi agba oso agha. Ha nọ na-aga njem ọtụtụ kilomita gafee West Africa na-achọ ndụ ka mma maka nwa ha bu n'afọ - dike football ga-eme n'ọdịnihu. Ebe E Si Nweta Foto: Maapụ Google na Instagram.
Alphonso Davies Ezinụlọ:
Na-ekwu maka ezinụlọ ezinụlọ Alphonso Davies, obi abụọ adịghị ya na ndị mụrụ ya, bụ ndị Liberia sitere na ezinụlọ dara ogbenye.
Debeah na Victoria bụ ndị di na nwunye na-eto eto mgbe agha nke abụọ nke Liberia malitere, mmepe nke hapụrụ ha nhọrọ nke isonye na agha ahụ ma ọ bụ ịgbapụ.
Ọ dabara nke ọma, ha na-ahọrọ nke ikpeazụ na ugbu a, ha abụọ (dị n'okpuru ebe a) na-ebi ndụ iji nwee ekele maka nhọrọ ndụ ha kama ịmebi osisi ezinụlọ ha.
Ndị mụrụ ya na-amụmụ ọnụ ọchị taa n'ihi na ha buru ụzọ mkpebi ezi uche dị na ya ịgbapụ agha.
“O siri ike ibi na Liberia n’oge agha n’ihi na ịlanarị pụtara na ị ga-ebu egbe lụọ ọgụ. Anyị enweghị mmasị na nke ahụ, ”
'' Nna Alphonso Davies na-echeta. N'akụkụ nne ya, ọ na-echetakwa ịgafe ozu iji nweta nri maka ndị ezinụlọ ya.
N'ezie, ebe a abụghị ụdị ebe ha ga-achọ ka ụmụ ha tolite.
Alphonso Davies Mmụta na Ọrụ Buildup:
Ezinụlọ Alphonso Davies nakweere onyinye mbugharị na Canada dị ka akụkụ nke usoro mbugharị n'oge ọ dị afọ ise. Ha batara na mba ahụ na 2005 ma bido biri na Windsor na Ontario.
Otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, ezinụlọ ahụ kwagara n'obodo Edmonton na Alberta. Ọ bụ n'obodo ahụ ka ndụ bidoro maka Alphonso, onye toro dị ka nwatakịrị nwere obi ụtọ n'akụkụ nwanne ya nwanyị nke nta na Ruth na obere nwanne.
Ọ bụghị nanị na-etolite na obi ụtọ na Kanada kama ọ nọ na-aghọ nwa amaala Canada.
N'ezie, ahịhịa ahịhịa nke Northmount Elementary na Edmonton bụ ebe Alphonso Davies buru ụzọ mụta otu esi agba bọọlụ dị ka egwuregwu nwata. Nke a bụ ebe ọdịnihu football ya malitere.
Banyere agụmakwụkwọ ya, Alphonso malitere ịga ụlọ akwụkwọ mama Theresa Katọlik n'otu obodo ahụ bụ Edmonton.
N'oge ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume ịhụ ọkwa nka dribbling ya na etu o si karie ndị ọgbọ ya mgbe ọ na-egwu bọọlụ na ụlọ akwụkwọ Katọlik mama Theresa.
Afọ ndị mbụ nke Alphonso Davies na Football:
Ekele Melissa Guzzo - onye nkụzi 6 nke Alphonso na onye nchịkwa egwuregwu na ụlọ akwụkwọ Katọlik nke mama Theresa - e debanyere ihe egwuregwu bọọlụ na ụlọ akwụkwọ gafere ụlọ akwụkwọ maka ụmụaka nọ n'ime obodo akpọrọ "Mmemme Footie Free".
Dị ka aha ya si dị, Footie Free enwere onwe ya ka o nyere ndị nne na nna Alphonso Davies aka na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ ego bọọlụ maka agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ ndị ọzọ.
Ebumnuche ahụ nyekwaara ụmụaka ndị ọzọ nọ n'ime obodo aka na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ ndebanye aha ma ọ bụ njem iji chọpụta ihe gbasara ọdịmma ha na bọọlụ.
Alphonso mechara gaa n'ihu ịbanye na ụlọ akwụkwọ Nicholas Academy. Nke a sochiri ọrụ afọ asatọ dị mkpa na Edmonton Strikers.
Alphonso Davies Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Na 2015, ndị nne na nna Alphonso Davies kwenyere n'ịgbanwe ọrụ, onyinye nke ga-akpọrọ nwa ha nwoke ka ọ kpọọ na Vancouver.
Site na nhazi anyị, ọ dị ihe dịka 1,159.5 km (site n'okporo ụzọ) site na ụlọ ezinụlọ na Edmonton. Debeah na Victoria nyere Alphonso ngọzi ha ma zipụ ya ka o sonyere ndị ntorobịa Vancouver Whitecaps.
Nwa ahụ dị afọ iri na anọ nwere mmasị na klọb ahụ, nke mere na ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ mbụ na-eto eto nke bịanyere aka na nkwekọrịta USL na afọ 14, ọnwa atọ na 15.
Kedu ihe ọzọ?… Alphonso nwetara nkwalite nye ndị otu mbụ nke Vancouver Whitecaps FC na 2016, mere mmalite MLS ya n'otu afọ ahụ wee nwee ọhụụ dị egwu.
Mgbe ọ dị afọ 15, Alphonso bụ onye ntorobịa ma nwee nnukwu agụụ maka ezi agwa maka ime nke ọma. Ebe E Si Nweta Foto: VancouverWhitecaps.
Alphonso Davies Biography - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
N'elu ọnụ ọgụgụ Alphonso na Vancouver Whitecaps FC, akpọrọ ya Onye egwu bọọlụ nke Afọ 2018 ma natakwa whitecaps 'Goal of the Year award.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ sịrị ọgbakọ ahụ nọrọ nke ọma site na ya itinye goolu abụọ na mmeri ha 2-1 meriri Portland Timbers. N'oge a, nwatakịrị ahụ nwere ike ịnwe mmetụta na-akpọ ya site na Europe.
Ọnwa ole na ole gachara na Jenụwarị 2019, Alphonso malitere oge ọhụrụ na-egwu ndị dike German Bayern Munich. Ọ bịanyere aka na klọb maka ndekọ ndekọ .9.84 2018m na XNUMX.
Kemgbe nwa agbọghọ dị afọ 19 batara na klọb ahụ, ya na ndị na-eme kpakpando na-emekọ ihe - dịka Robert Lewandowski, Philippe Coutinho, David Alaba - ma meriekwa aha mbụ ya na Bundesliga na klọb. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
N'ezie, ịrị elu ya banyere ịbụ onye a ma ama abụwo meteoric. Ebe E Si Nweta Foto: ESPN.
Onye bụ Alphonso Davies 'Girlfriend?… O nwere nwunye na nwa (s)?
Ọ hụrụ egwuregwu zuru oke na Jordyn Huitema. Ọ bụghị ya?
Ewezuga ebe egwu, Alphonso na-eme akụkọ maka mmekọrịta ya na enyi nwanyị Canada amụrụ Jordyn Huitema. Amabeghị ihe banyere mgbe lovebirds bidoro ịlụ.
Otú ọ dị, ha anọkọwo ọnụ ruo ogologo oge ka a hụ ha dị ka di na nwunye Ike Canada site na ndị nta akụkọ. Nke a bụ n'ihi na Jordyn na-agba bọọlụ ọkachamara na French Division 1 Féminine club Paris Saint-Germain na ndị otu mba Canada.
Alphonso na-efega Paris mgbe niile ka ya na enyi ya nwanyị Jordyn nọrọ ezigbo oge tupu ya alaghachi na Bayern Munich.
Ha na-etinye nlezianya anya na ọrụ ha na-eto eto, mmepe nke na-akọwa mgbe ha na-enweghị nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị (nwa) n'alụghị di na nwunye.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dịghị ịchịkwa eziokwu ahụ bụ na ha nwere ike ime ka mmekọrịta ha na ọkwa ọzọ (alụmdi na nwunye) n'oge na-adịghị anya.
Ndụ Alphonso Davies Ndụ:
Alphonso Davies na-enwe ihe ịga nke ọma na football na ezinụlọ ya dị ịtụnanya. Nọdụ ala ma zuru ike ka anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara ndị ezinụlọ ya na ngalaba a. Anyị na-amalite site na inyere gị aka ịmatakwu eziokwu banyere nne na nna Alphonso Davies.
Banyere Alphonso Davies Nna na mama m:
Ndị nne na nna winger bụ Debeah na Victoria n'otu n'otu. Na 2005 Debeah na Victoria mere mkpebi mgbanwe ndụ nke ịkwaga Canada na Ghana n'amaghị ihe ọ bụla gbasara ebe ahụ ma ọ bụ nwee ndị ikwu n'ebe ahụ.
Naanị ihe ha kwenyere bụ na njem ahụ ga-enyere nwa Alphonso aka inwe ọdịnihu dị mma.
Zute ndị nne na nna Davies Alphonso.
Ọ na-aga n'ekwughị na mkpebi ahụ akwụrụ ụgwọ karịa ihe ha chere. N'ezie, onye ọkpọ ahụ na-ekwu na ọ na-adịrị ya mfe ịkwali onwe ya mgbe ọ bụla ọ na-eche echiche banyere mkpebi na-agbanwe ndụ nke nne na nna ya na-akwado ya mgbe nile banyere ọdịnihu ya.
Banyere Alphonso Davies Sibling na ndị ikwu:
Alphonso nwere ụmụnne nwoke abụọ tọrọ nke ọ tọrọ. Ha gụnyere nwanne ya nwanyị nke nta bụ Ruth na obere nwanne nwoke a ma ama.
A mụrụ ụmụnne na Canada. Dika odi, ha aghaghi agbaso usoro nke inweta nwa amaala Canada dika Alphonso mere.
Alphonso Davies ya na nna ya, nne ya na ụmụnne ya ndị nwoke.
Ọ bụ ezie na winger enyebeghị ndị nta akụkọ ịmatakwu banyere ụmụnne ya. O kwughị banyere ezinụlọ ya na nna nna ya dị ka o metụtara nne na nna ya na nne na nna ya.
N'otu aka ahụ, ndị nne na nna nwanne Alphonso, nwanne nna ya, nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya amachaghị nke ọma n'oge a na-ede akwụkwọ akụkọ a.
Alphonso Davies Ndụ Nke Onwe:
Ọnye na-bụ Alphonso Davies?… You maara na ọ na-egosipụta àgwà mmadụ nke ndị mmadụ na-eduzi site na Scorpio Zodiac Sign?
Eziokwu bụ, Onye isi nri D (aha otutu ya) bu nke nwere mmasi, nweko ihe doro anya, onye puru iche, o nweghikwa nsogbu isi ikwu ihe o choro ikwu.
Enwere ndị egwuregwu ole na ole maara ka esi egosipụta onwe ha nke ọma. Alphonso na-eme ndepụta.
Tụkwasị na àgwà nke Alphonso's persona bụ echiche ya maka ịghara ịkọ ọtụtụ ihe gbasara ndụ ya na nke onwe ya.
Mmasị onye ahụ na-enwe mmasị na ntụrụndụ gụnyere ịgụ egwu, igwu egwuregwu vidio ma soro ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa. Ọ dịkwa mma isi nri, ihe omume ntụrụndụ nke mere ka aha ya "Onye isi nri D".
Eziokwu Alphonso Davies Web Life:
Banyere otu Alphonso Davies si eme ma na-emefu ego ya, o nwere atụmatụ ruru $ 1 nde n'oge edere akụkọ ndụ a.
Onye winger na-anata ego buru ibu site na nkwenye. N'ihi nke a enweghị ajụjụ gbasara etu ọ ga-esi nwee ike nweta akụ ndị dara ada dị ka ụgbọ ala ndị mara mma na ụlọ ndị dara ọnụ.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke winger na-anwa ịnara akpa ya site n'azụ ụgbọ ala buru amụma ịbụ Audi.
Eziokwu Alphonso Davies:
Iji mechie akụkọ banyere nwata anyị na Alphonso Davies, akụkọ ndị a, amachaghị banyere ma ọ bụ akụkọ banyere ya.
Eziokwu # 1- Nkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ ya nke ọ bụla:
Kemgbe ọ malitere na Jenụwarị 2019, ọtụtụ ndị egwu atụgharịala uche na ya Ego ole ka Davies Alphonse na-akpata?….
Na 2019 ahụ, nkwekọrịta Chef D hụrụ ya ka ọ na-etinye ego nkwụnye ụgwọ nke 1.2 Million Euros kwa afọ. Ihe ijuanya dị n'okpuru ebe a bụ ụgwọ Alphonso Davies na-akwụ kwa afọ, ọnwa, ụbọchị, oge elekere, nkeji na sekọnd.
Ihe ọ na-akpata kwa afọ € 1,200,000 £ 1,034,559
Ihe ọ na-akpata kwa ọnwa € 100,000 £ 86,213
Ihe ọ na-akpata kwa izu € 24,390 £ 21,028
Ihe ọ na-akpata kwa ụbọchị € 5,949 £ 5,129
Ihe ọ na-akpata kwa elekere € 248 £ 214
Ihe ọ na - akpata kwa nkeji € 4.13 £ 3.56
Ihe ọ na-akpata Kwa Sekọnd € 0.07 £ 0.06
Nke a bụ ego Alphonso Davies rụgotara kemgbe ị bidoro ilele Peeji a.
Ị maara?… Nwoke ahụ aha ya bụ German kwesịrị ịrụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala afọ 1.84 € 86,123, nke bụ ego Chef D na-enweta na ọnwa 1.
Eziokwu # 2- Enweghị nsogbu na FIFA Rankings:
Alphonso nwere nanị afọ abụọ nke ahụmịhe bọlbụ elu elu, mmepe nke na-akọwa ihe kpatara o ji nwee ọkwa FIFA dị ala nke 73.
O doro anya na oge gwọọ ma dịkwa mma. Ikpe ahụ agaghị adị iche maka winger ka ọ nwere ikike ị gafere 90, ọbụlagodi ịbụ FIFA kachasị mma.
Ọkwa ya bụ n'ezie ọ ga-edekọ mmụba n'afọ ndị sochirinụ. Ebe E Si Nweta Foto: SoFIFA.
Eziokwu # 3 - Smụ sịga na Mmanya:
Pn'ígwé onye na-a smokeụ sịga ma na-a drinkụ ihe ọ haveụ haveụ nwere ihe ọ bụla maka egbugbere ọnụ gbara ọchịchịrị na iwu na-agba ọsọ ugboro ugboro. Alphonso bu uzo zuru oke banyere ihe abua a choputara.
Eziokwu # 4- Ogbugbu:
Gini bu inwe Tatoos mgbe mmadu ji ochichaa? Ewezuga ihe eji aru ya na edo edo, Alphonso agagh abu onye choro ime ka ogo ya di elu 5
You hụrụ egbugbu ọ bụla? mee ka anyị mata n’ime igbe nkwupụta. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Eziokwu # 5- Kedu ihe bụ Alphonso Davies 'Religion:
You na-echeta mama Theresa Catholic school? Catholic Ee, ọ bụ ụlọ akwụkwọ Katọlik dị na Edmonton, Canada. Anyị ejirila nke a gosi na nne na nna Alphonso Davies zụlitere nwa ha ka ọ sonye n'okpukpe Ndị Kraịst.
Agbanyeghị, nwatakịrị ahụ edochabeghị anya n'okwu banyere okwukwe. ma, nsogbu anyị na-akwado Alphonso ịbụ Onye Kraịst n'ihi na o nwere nwanne nwanyị aha ya bụ Ruth ebe mama ya na - akpọ - Victoria.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Alphonso Davies Plusmụaka Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe.
Alphonso nwere nwanne nwoke nke aha ya bu Bryan Davies. Mụ na ya gụrụ akwụkwọ n’ụlọ akwụkwọ elementrị nke St. Bonaventure. Ekwenyesiri m ike na ọ kwagara St. Albert. Instagram ya bu @bryandaviesss
Enwere m obi uto ma na-ekele Chineke ekele maka oke egwu a na-aga nke ọma maka ndị nne na nna ndị Liberia maka ihe ha mere n'oge gara aga maka uru nke ihe ịga nke ọma taa
Alfanso nke igwe bu oke nwannem, I gha eme ihe kariri ime
Ka Onyenweanyi nonyere gi n’ọrụ gi !!!!!!!!!
Anyị Liberins niile nọ gị dịka anyị mere n'oge gara aga maka naanị ụwa kachasị mma na Liberia ma taa Ọ bụ Onye isi maka mba anyị.
M na-ekpe ekpere ka ị nweta ikike kachasị elu na bọọlụ
(Ie wee bụrụ onye mmeri nke balon d'ma ọ bụ).
Ghana bụ ụlọ gị
20 ụbọchị gara aga
Ghana abụghị ụlọ ya, n'ihi na ha enyeghị ya nwa amaala, ya mere ọ bụ onye Canada, ebe Canada mere ka ọ dịrị ya mfe ibi ndụ na-enweghị nchekasị ma ọ bụrụ na ọ ga-adị ndụ n'echi ya. Gaa Canada!
Ihe omumu a banyere Alphonso bu ihe m n’emebi, dika ndi Liberia, a karim m elu karie n’ihi na o jiri okpukpo German ya merie ndi Champions League. Liberia nwere obi uto na gi, Alphonso !!!! Soar elu na ị ga - eme nnukwu ọdịiche otu ụbọchị
Anọ m na-elele egwu ị na-eme n’oge ngwụcha egwuregwu Njikọ Njikọ na PSG. Are bụ ezigbo onye ọkpụkpọ.
Chukwu gozie gi Alphonso LIB chetara ulo gi bro anyi hụrụ gi n’anya
Obi dị m ụtọ dị ka onye Liberia ka ọ hụ nwanne m nwoke Liberian ka ọ na-egwu ụdị bọọlụ a, a na m eche ya. Ndị Liberia niile na-ekele gị nwanne Alphanso Davies, agbanyeghị na ị na-ahụta onwe gị na Canada, anyị ka hụrụ n'anya dịka ndị Liberian.please na-alọta ma na-eme obere ihe ndị dị mkpa maka obodo ahụ.
Bọchị gbanwee: Mee 5, 2021
Bọchị agbanweela: June 8, 2021